♥ Budapest Interior (52sqm) eduze kwePhalamende ♥
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Zsófi & Tomi
Uma kufikwa ekudaleni leli fulethi elisanda kulungiswa, elinesiphephetha-moya enkabeni yedolobha lase-Budapest, umgomo wethu kwakuwukunikeza i-sthg eyingqayizivele kubavakashi bethu bakusasa. Leli gumbi lokulala elingu-1, igumbi lokuhlala elingu-1 le-deluxe lilungele imibhangqwana noma imindeni emincane engafika kubantu abangu-4. Ibhilidi elidala litholakala endaweni eyi-100m ukusuka eDanube esifundeni esimaphakathi somlando, ukusuka lapho uzothola khona ukufinyelela kalula enkabeni nasezindaweni ezinkulu zokubona zedolobha, njengePhalamende noma i-St. Stephen's Basilica.
Sawubona Stranger, ngiyajabula ngokuthi udlule!
Leli fulethi eliklanywe kabusha, elilungiswe ngokuphelele, eline-air conditioning liyindawo enhle nenokuthula, elungele ukuphumula ngaphambi nangemuva kokuhlola inkaba yedolobha. Ifakwe kahle, ivulekile futhi inethezekile. Inegumbi lokuhlala elikhulu elinombhede kasofa osekhoneni oguqulekayo obheke i-TV enkulu yesibuko esiyisicaba, ikamelo lokulala elikhulu elihlukene elinetafula lokugqoka kanye nekhabethe elikhulu kanye negumbi lokugezela elihlukene. Ifulethi lokuqala lakhiwe esakhiweni esidala sedolobha lendabuko kusukela ngo-1900, linombono wegceke elithulile kanye nodonga oluhle oluluhlaza olumbozwe konke ngo-ivy. Indawo yendlu ilungile, isendaweni ehlonishwayo manje nedumile 'yeSifunda 5', idolobha elinomlando laseBudapest eduze kwePhalamende nomfula iDanube. Uma ufuna ukugijima, ungafika esiqhingini saseMargaret ngemizuzu emi-5 okuyindawo ehamba phambili yokugijima e-Budapest. Lonke uhlobo lwezokuthutha zomphakathi lulapho noma phakathi kwemizuzu engu-5 yokuhamba ngezinyawo (amathilamu, amabhasi, izitimela ezihamba ngaphansi). Ulayini wethilamu omuhle kakhulu e-Europe, ithilamu ephuzi engunombolo 2 idlula ngakwesokudla kwesakhiwo. Kushesha ngokwanele ukuba kude nendawo yokuphila yasebusuku ukuze kuthule, nokho kusondele ngokwanele ukuhamba edolobheni. Kukhona ikhishi lesimanjemanje, elihlome ngokuphelele laseMelika elinazo zonke izinto zasekhishini (umshini wokuwasha izitsha, ifriji, ifriji, ihhavini, njll.), elinomshini wekhofi weNespresso, okokusika kanye nezitsha eziyisisekelo. Ifulethi line-TV enesikrini esiyisicaba esinohlu olubanzi lwesiNgisi nezinye iziteshi zekhebula zolimi lwangaphandle, ukuxhumana kwe-Wi-Fi okusheshayo nokushisisa okuphakathi.
Sicela ubheke nxazonke futhi uhlole igalari! Wamukelekile lapha!
Izithombe ziyazikhulumela, uzothola okubonayo, kulula kanjalo. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nekhaya lethu le-glam! Silapha ukuze sisize! :)
UZsofi & Tomi
4.96 ·72 okushiwo abanye
Le ndawo iyindawo ehlonishwa kakhulu ngasohlangothini lwe-Pest, edume ngokufanele ngokufinyeleleka kahle kwezinto zokuhamba zomphakathi, izindawo zayo zabahamba ngezinyawo ezigcwele izindawo zokudlela ezisezingeni eliphezulu, amathilomu nezindawo zokudlela kanye nezakhiwo zayo zasendulo kanye nenani elikhulu lezindawo eziheha izivakashi. Ukusuka lapha, izindawo eziyinhloko zokubuka zifinyeleleka kalula futhi manje kuzo zitholakala endaweni ehamba ngezinyawo ukusuka efulethini. IPhalamende elimangalisayo kanye neDanube, ngokwesibonelo, kukude ngomzuzu owodwa kanye nemihlanu kuphela ukusuka ekhaya lakho lesikhashana lesikhathi esizayo. Ibhilidi ngokwalo libhekene ne-Olympia Park egadiwe egcwele izihlahla, izinkundla zokudlala, imithombo kanye nenkundla yebasketball.
Izinyathelo nje ukusuka efulethini uzothola:
Inkundla yokudlala (50m)
Indawo yokudlela (50m)
Izindawo zokudlela zasekuseni, (50 m)
Izitolo ezinkulu kanye nezitolo ezilula (300m)
Indawo yokubhaka (300 m)
Ama-Greengrocers (300 m)
Ibungazwe ngu-Zsófi & Tomi
Ukuzihlola wena ngokwakho bese uyaphuma kuyatholakala: Ngaphambi kokufika sizokunikeza ikhodi yokufinyelela ezitebhisini kanye nekhodi enezinhlamvu ezi-4 yokhiye ophephile nokhiye beminyango kuwo. Sizokunikeza amavidiyo amafushane abonisa inqubo yokufika, ngokubona kwethu lena indlela evumelana nezimo kakhulu neshelelayo yokungena nokuphuma.
Ukuxhumana: sizoqhubeka sithintana nge-Airbnb, i-imeyili, noma sitholakala kumakhalekhukhwini, uma kunezicelo eziphuthumayo sincoma ucingo noma i-sms futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu. Uma kwenzeka udinga ukuthi sihlangane mathupha, sizohlangana nawe ngokujabula efulethini.
Ukuzihlola wena ngokwakho bese uyaphuma kuyatholakala: Ngaphambi kokufika sizokunikeza ikhodi yokufinyelela ezitebhisini kanye nekhodi enezinhlamvu ezi-4 yokhiye ophephile nokhiye…
UZsófi & Tomi Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: MA19015577